News - Waa maxay farshaxanka farshaxanka birta
Farshaxanka farshaxanka biraha wuxuu ka ciyaaraa door aan la beddeli karin naqshadeynta booska iyo qurxinta. Farshaxan bir ah oo qurxin ayaa lagu rakibi karaa banaanka dadweynaha ama meelaha gudaha ah, sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa goobta dhaqanka.
Waan ognahay in farshaxanada biraha ay ku jiraan noocyada qaar sida farshaxanka birta ah ee birta ah, taalada naxaasta ah, taalada naxaasta ah, farshaxanka birta iwm. Sanadihii la soo dhaafay, farshaxanka birta birta ah ayaa si balaadhan looga isticmaalay meelo kala duwan sida naqshadda muuqaalka muuqaalka ah, hoteel, naadi, xafiis, guri, suuq dukaameyn, xaafad la deggan yahay, tuulooyin, bad-weyn, goob fasax iyo wixii la mid ah. Marka la barbar dhigo farshaxanka fiberlass, farshaxannada biraha gacanta lagu sameeyo waxay leeyihiin qaabab badan oo sifiican u muuqda, oo ku habboon naqshadda casriga ah. Waxaa jira xoogaa faa'iidooyin ah, tusaale ahaan waxay yeelan doontaa waqti dheer oo nolosha ah, gaadiid si sahlan, u rakibida, dayactir, iwm.
PIEDRA (XIAMEN) SCULPTURE CO., LTD. waa soo saaraha xirfadeedka Shiinaha ee farshaxanimada. Shirkaddu waxay soo saartay farshaxanno badan oo dal iyo dibad ah, waxayna sumcad weyn ka heshay macaamiisheenna. Waxaan kuu soo bandhignaa dhammaan noocyada alaabada farshaxanka birta, in ka badan 1000 alaab oo xulashadaada ah. Waxaan si diiran u soo dhawaynaynaa baaritaankaaga haddii aad ka hesho.
Sanadkii 2008, waxaan soo saarnay farshaxan weyn oo birta lagu sawiray oo loogu talagalay Indonesia, kaas oo lagu rakibay suuqa weyn ee dukaameysiga. Naqshadeynta isgoysyada waxaa sameeya 316L bir daxaleyn weyn, oo lagu rinjiyeeyay midab madow iyo midab dahab ah marka loo eego doorbidista macmiilka. Oo tiirarka loco waa dhererkiisu yahay 10.4m * 2.3m ballac ah * 3.5m dherer ah, oo qaadanaya qiyaastii 3months inuu ku dhammaado. Ugu dambayntiina ugu gudbi macaamiisha gacanta si badbaado leh, oo waxay macaamil ka heshay faallo sare. Waxa aan ballan qaadnay waa inaan siino macmiil kasta tayo wanaagsan, dhammaantoodna waa macaamiishayada VIP-da haddii ay amar farshaxan ah na siinayaan.
Qaabka Xiriirka: Nala soo xiriir karo adigoo raacaya dariiqa baaritaan dheeri ah haddii aad xiisaynayso.
Iibiyaha: Marwo Cathy
Waxaan Wadahadalnaa: 0086-13950110440